bass guitarist, Greg Lake, guitarist, onye na-emepụta ihe, onye ọbụ abụ
Gregory Stuart "Mmiri" Greg(10. 1947 November Poole, England - 7. 2016 London na December) bụ a British musician, na-agụ egwú, na-emeputa na songwriter, tọrọ ntọala so King Crimson na Emerson, Lake & Palmer.
60. Okpomọkụ: Chi na Eze Crimson
Greg Lake nwere mmasị n'egwú kemgbe ọ bụ nwata. Emerson, Lake & Palmer kachasị njọ, "Lucky Man," dere mgbe ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ. Na 1968, n'Ọdọ Mmiri bụ otu n'ime otu a na-akpọ Chi. N'etiti a bụ ụfọdụ ndị na-esote Uraịa Heep. Ugwu mmiri na-aga na 1968 tupu ịhapụ akwụkwọ mbụ ha.
Osimiri hapụrụ iji mee ka King Crimson na Robert Fripp, bụ enyi ochie nke ụlọ akwụkwọ ya. Ebe ọ bụ na Fripp na Lake dịbu ma ndị guitarists, Lake malitere igwu egwu.
Abụọ mbụ nke King CrimsonN'ụlọikpe nke Eze CrimsonOsimiri rụrụ dị ka onye na-ede egwú na onye na-agụ egwú. Ọ bụ onye na-emepụta ihe nkiri Tony Clarke, bụ onye na-emepụta fim maka Moody Blues. Ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, Clarke hapụrụ, n'ihi na ọ pụghị ịghọta ihe ìgwè ahụ na-agbalị ime. Osimiri emeela ka onye na-emepụta ihe, ọ bụ ezie na otu a na-egosi na album ahụ.
Eze Crimson gara na gburugburu North America na The Nice, nke ọ bụ "njem" njem. Na April 1970, mgbe njem a gasịrị Lake hapụrụ King Crimson na Keystone Keith Emerson nke Nice na onye na-egwu egwu Carl Palmer nke Atomic Rooster tọrọ ntọala Emerson, Lake & Palmer. N'agbanyeghị na ọpụpụ ya si n'aka King Crimson, Lake kwekọrịtara inyere ha aka mezue abụ nke abụọ, bụ King CrimsonNa Wake nke Poseidon.
70. N'oge okpomọkụ: Emerson, Lake & Palmer
ELP nwere nnukwu ihe ịga nke ọma n'afọ ndị 1970 (ree 30 nke ọtụtụ nde albums) ma nwee oke òkè na mmepe na-eto eto. Ọdọ Mmiri enyeworo ọtụtụ abụ na ndekọ nke ELP, ma ihe kachasị ama bụ ndị guitar a bụ la vie (Ọrụ Mpịakọta M), "Ma ... Ị gbanwee m" (Ọrịa Na-ahụ Maka Ọgwụ Ahụ) na "The Sage" ("Foto ndị dị na ngosi"). Ọdọ Mmiri ghọrọ onye a ma ama mgbe a tọhapụrụ "M kweere na Christmas Christmas" na 1975, nke e mesịrị tinye na ELP album Works Volume II.
Na 1973 Lake tọrọ ntọala Manticore labelụ na aka a nkwekọrịta na ụfọdụ nkà nka ka ndị Italian Premiata Forneria Marconi na Banco del Soccorso mutates na songwriter King Crimson na Emerson, Lake & Palmer Peter Sinfield.
80. N'oge okpomọkụ: Asia na ọrụ ndị ọzọ
Mgbe a kpochapụrụ ìgwè ELP ahụ, Lake na 1983 gara Eshia na-anọchite anya nwa oge maka John Wetton wee wepụta akwụkwọ ndị a na-agbapụta abụọGreg Lake(1981) aManeuvers(1983), ma site n'enye aka na Gary Moore, bụ onye na-eme ihe nkiri oge ochie Lizzy. Na 1986, tinyere Emerson na Cozy Powell, ha wepụtara akwụkwọEmerson, Lake na Powell, nke bụ nlọghachi nke ELP na Powell na-anọchi Palmer, bụ onye na-egwuri egwu na Eshia.
90. N'oge okpomọkụ: Ọzọ Emerson, Lake & Palmer
Emerson, Lake & Palmer na-amalite na mmalite nke afọ 1990 na akwụkwọ mpịakọta na-aga n'ihu na-agafe ihe nkiri okpomọkụ n'oge ochie ma wepụta akwụkwọ abụọ. 1998 nwere ọnọdụ ọjọọ n'etiti ndị ELP ma otu ahụ hapụrụ ìgwè ahụ.
2000: Nhazi oge na Greg Lake Band
Keith Emerson, n'ime ihe ndekọ ya, "Foto ndị na-egosi ihe ngosi," site na 2004, na-egosipụta foto dị ebube nke Glig Lake. Ọ zara site n'ikwu na ọ gaghi eme ihe ọzọ na ELP ọzọ. Kemgbe ahụ, ọ hụbeghị ihe dị ukwuu na egwú ahụ, karịsịa mgbe ọ gara 2001 na Ringo Starr dịka onye so na Band All-Starr. Ná ngwụsị nke afọ 2003 na-akpọ bass guitar na abụ "Ezi Ezi Nwa Nwata" site Onye.
22. October 2005 malitere njem nleta na ìgwè ọhụrụ ya bụ "Greg Lake Band", nke natara nzaghachi dị mma. Otu ndi mmadu mere David Arch na keyboard, Florian Opahle na guitar, Trevor Barry bass, na Brett Morgan n'igwe. Warner Bros / Classic Pictures wepụtara 2006 abụọ-album na mmalite nke Greg Lake na zuru swing, olu ya dị omimi na karịa karịa mgbe ọ bụla. E kwesiri ka Greg Lake Band gaa mgbakọ 2006 na Septemba, ma a na-akpọ ya na njedebe ikpeazụ iji "nsogbu nchịkwa."
Greg Lake 21. December 2006 rụrụ abụ "Karn Evil 9" ya na Trans Siberian Orchestra na Nassau Coliseum na Uniondale, New York.
Ọ nwụrụ na London na 7. December 2016 mgbe ọ dị afọ 69 mgbe a lụsịrị ọrịa cancer.
Ihe nkiri omimi
1995Oge Ọchịchị Egwurugwu Ọchịchị Ndị Eze Greg Lake
1997The Greg Lake Retrospective: Site na mmalite
1998Site N'okpuru: The Bootleg Official
1981Hụrụ Gị n'anya nke ukwuu
1981Ka m hụ gị n'anya tupu ị gaa
1981Maka Ndị Na-agba
1981Ọ na-ewe iwe
1983Nwaanyị Dị Ka Gị
5: Kasị Mma nke Emerson, Lake & Palmer
7: Na Wake nke Poseidon
9: Ọrụ Mpịakọta 1
14: N'ụlọikpe nke Eze Crimson
15: 21st Century Guide to King Crimson - Mpịakọta Nke - 1969-1974
16: Aha m bụ Earl
20: Asia (otu egwu)
21: Eze Crimson
22: Peterborough, Ontario
27: Nkọwapụta ihe nnọchianya hockey na MS 2011
28: MED Daedalus
29: Ndepụta nke Bassists
30: Ezigbo egwu
31: Akwado Mgbidi
33: 1970 na egwu
34: Egwu Hershey
37: United States na 1984 Summer Olympics
38: Helix (otu ìgwè)
39: Na-agbaso 1997 World Championship
40: Ndị Ice Hockey na Winter Olympics 2014
41: Ntinye aka Connecticut
42: The Falls: Agba nke Ịhụnanya
45: N'okpuru Cover
46: Nkọwapụta ihe nnọchianya hockey na MS 2015
49: Ịgba (Mormonism)
Stuart Gregory "Greg" Lake (10. 1947 November Poole, England - 7. 2016 London na December) bụ a British musician, na-agụ egwú, na-emeputa na songwriter, tọrọ ntọala so King Crimson na Emerson, Lake & Palmer.
Greg Lake onwe-akpọ mpụta mbụ studio album Greg Lake. The album e wepụtara na October 1981 na Chrysalis Records labelụ na ya na-emeputa Greg nọ naanị Lake.Seznam skladebObsazení Greg Lake - guitar, zpěvGary Moore - kytaraSteve Lukather - kytaraDean Parks - kytaraW. G. Walden - kytaraGreg Mathieson - klávesyBill Cuomo - klávesyTommy Eyre - klávesyMichael Giles - bicíJeff Porcaro - bicíJode Leigh - bicíTed McKenna - bicíTristian Margetts - baskytaraDavid Hungate - baskytaraWillie Cochrane - pipeDavid Milner - pipeClarence Clemons - saxophone
Emerson, Lake & Palmer (ELP dị mkpụmkpụ) bụ otu ìgwè na-asụ Bekee. Na 70. afọ nke narị afọ gara aga bụ ndị a ma ama, ha rere 40 ọtụtụ nde albums ma nwee nnukwu egwu. Keith Emerson (keyboards), Greg Lake (guitar, bass, vocals) na Carl Palmer (mkpọ, percussion) na-agụ egwú ahụ. Nkume a nke a, nke e hiwere na 1970, na-arụ ọrụ ụfọdụ nke egwu oge ochie nke Europe na ọrụ ya, a pụkwara itinye ya n'etiti ndị nnọchianya nke nkume na-aga n'ihu na symphonic.
Emerson, Lake & Palmer bụ ihe nkiri nke mbụ nke ndị agha British Emerson, Lake & Palmer. Ihe ndekọ ya mere n'oge afọ 1970 na Ụlọ Advision na London maka mmepụta nke Greg Lake. Na UK, a tọhapụrụ album ahụ na October 1970; na US ruo January 1971. Na 2012, a tọhapụrụ album ahụ na reissue.
Tarkus bụ nke abụọ studio album nke ndị Britain na-aga n'ihu ìgwè nkume Emerson, Lake & Palmer. Ihe ndekọ ya nọ na 1971 na January na Advis Studios na London. Site na Greg Lake, a tọhapụrụ album ahụ na June na 1971 na Iceland Records.
The Best of Emerson, Lake & Palmer (1994) bụ a chịkọtara album nkume otu Emerson, Lake & Palmer.Seznam track "Site ná mmalite" (4: 13) "Jerusalem" (William Blake, C. Hubert H. Parry) (2 : 44) "Ma ... Ị Tụgharịa Me On" (2: 53) "oké ngosi maka Common Man" (Aaron Copland) (solo version 2: 57) "Knife Edge" (5: 05) "TARKUS" (20: 35) "Mgbawa" (2: 43) "nkume nke Years" (3: 44) "Iconoclast" (1: 15) "Nkume" (3: 11) "Manticore" (1: 52) "egbughị" (3: 51) "Aquatarkus" (3: 59) "Karn Ọjọọ 9 1 Part 2st echiche" (4: 43) "C'est La Vie" (4: 16) "Hoedown" (Aaron Copland) (3: 43) "trilogy "(8: 53)" Honky Tonk Train Blues "(3: 09)" Black Ọnwa "(otu version, 4: 46)" kechioma Man "(4: 37)" m Kwere na Nna Christmas "(Greg Lake) ( mbụ solo version 3: 30) "Peter Gunn" (bo nus track)
Epitaph bụ Eze Crimson nke egwu egwu egwu egwu. A tọhapụrụ ya na 1997 (lee 1997 na Music) na egwu egwu na ndekọ redio nke ìgwè ahụ site n'oge mbụ ha, site na 1969.
Na Wake nke Poseidon bụ album nke Abụọ Rock Rock nke Britain. A tọhapụrụ ya na 1970 (lee 1970 na egwu), na n'igwe UK na-edekọ ọkwa dị iche iche na 4. ebe, nke kachasị mma nke King Crimson.
Dean Parks (* 1947) bụ onye na-agụ egwú American, di di Carol Parks. A mụrụ na Fort Worth, Texas, 1970 kwagara Los Angeles. N'oge ya ọrụ ọ na-egwuri maka ọtụtụ narị E na rụkọrọ ọrụ na ọtụtụ egwú tinyere Leonard nchụàjà, n'ihi na ihe atụ, Stevie eche, Marvin Gaye, Lizz Wright, Greg Lake, Billy Joel, David Cassidy na Art Garfunkel. Ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-egwu egwú studio, ma na-egwuri egwu na egwuregwu, dịka 1977 na achịcha. N'ime afọ 2005 gaa na 2011 sooro David Crosby na Graham Nash.
Ọrụ Mpịakọta 1 bụ akwụkwọ nke ise nke studio nke na-aga n'ihu na Emerson, Lake & Palmer, nke a tọhapụrụ na 1977. Nke a bụ album abụọ (2 LP, mgbe e mesịrị na 2 CD) wee kee ya na mpaghara anọ.
The Gods bụ English gbalaga hiwere na 1965, na obu ụzọ nke ọzọ ma ama Uriah Heep. History skupinyMick Taylor (nke e mesịrị John Mayall & na Bluesbreakers), Brian Glascock (nke e mesịrị na Bee Gees na The motels) na John Glascock (nke e mesịrị Mkpịsị Ụkwụ Abụba na Jetro Tull), bụ ụmụ klas na ụlọ akwụkwọ dị Hatfield na-egwuri ọnụ a gbalaga na-akpọ The Juniors (nwekwara ndị ala ọzọ), nke e hiwere na afọ 1962. Ha teammates ama Malcolm Collins na Alan Shacklock. Na Columbia dere ya mbụ otu "E nwere ihe a mara mma girl / n'akpa uwe Size" (Columbia DB7339), nke pụta na 1964.
Peter Giles (* 17. 1944 June Havant, Hampshire) bụ a British bassist na zpěvák.V afọ 1967 tọrọ ntọala ọnụ ya na nwanne ya, oku igba Michael, na guitarist Robert Fripp otu Giles, Giles na Fripp. Ọ bụ ezie na ọ ke nweta ihe ịga nke ọma, ma tọhapụrụ a ole na ole kpọrọ na otu album. Na mgbụsị akwụkwọ 1968 Peter Giles dochie Greg Lake, nke guzobere otu ìgwè King Crimson. Ọzọ, n'oge 1970 ekpe Lake Giles ka a bass player abuana ke abụọ album nke gbalaga isiokwu ke Ruth nke Poseidon.
Gregory John Norman AM (* 10 February 1955, Mount Isa, Queensland) bụ onye gọọmenti Australia. Na 80. na 90. afọ 20. narị afọ bụ ngụkọta nke izu 331 nke onye ndu ụwa. Golf malitere ịrụ ọrụ na 15 afọ na afọ anọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bịara na circuit ọkachamara. Na 1976, ọ meriri n'egwuregwu mbụ (West Lakes Classic dị na Adelaide), n'oge na-adịghị anya, ọ malitere ịkwanye na circuit PGA.
The okwu na-ezo aka supergroup karịsịa na nkume music otu esịnede mara ngwá-abụ abụ. Supergroup kpụrụ nwayọọ nwayọọ, n'oge na-aga n'ihu pesonel mgbanwe a kpụrụ ndammana iche iche (dị ka Ee, King Crimson) ma ọ bụ na e kere site ọkọ si mara egwú (dị ka Emerson, Lake & Palmer, Dugara Zeppelin, Ude). Ụfọdụ supergroup kere a afọ iri, ma ndụ ọtụtụ n'ime ha bụ obere na disintegration esokarị site esemokwu n'etiti ókè nnukwu mmadụ.
N'ụlọikpe Crimson nke Crimson, nke isiokwu ya bụ "A Observation" bụ nke King Crimson dere, bụ abụm mbụ nke 1969, onye Britain na-enwe ọganihu King Crimson. The album ruru 5 na sụgharịrị UK. ebe. Na USA, ọ natara RIAA Gold Plaque ma weere ya otu n'ime ihe ndị dị egwu nke egwu egwu egwu.
The 21st Century Guide to King Crimson - Mpịakọta nke Mbụ - 1969-1974 bụ igbe ntinye nke ndị agha Rock Rock nke Britain. A tọhapụrụ ya na October 2004 (lee 2004 na Music). Nke a na igbe anọ dị na King Crimson, nke onye ndú na onye naanị ya na-adịgide adịgide, Robert Fripp bụ onye guitarist dere. The 21st Century Guide to King Crimson - Mpịakọta One - 1969-1974, dị ka aha ya na-egosi, na-emekọ na e kere eke nke gbalaga kemgbe 1969 n'ihu ya n'oge September 1974 Fripp disbanded. Igbe dị na ya gụnyere ihe ndekọ diski abụọ na obere diski egwu egwu abụọ a tọhapụrụ na mbụ.
Aha m bụ Earl bụ usoro ihe nkiri American nke na-emepụta ihe nkiri nke onye America na-emepụta ihe bụ Greg Garcia na mmekorita ya na 20th Century Fox. A na-agbasa usoro ahụ site na 20. September 2005 ka 14. Mee 2009 na NBC. Na Czech Republic usoro a na-agbasa site na Prima Cool.
Peter John Sinfield (* 27. 1943 December Fulham, London) bụ English artist, na-ede uri na musician, mara dị ka a so dee na so na oké nkume mmachi King Crimson, onye ngalaba-nchoputa.
Colin Flooks, mara dị ka mma Powell (29. 1947 December, Cirencester, England - 5. 1998 April) bụ a British rock bubeník.Svou egwú malitere na otu ndị dibịa afa na 1965. Na 1971, ọ banyere Jeff Beck Group ya na ya dekọtara abụ abụọ, mgbe ahụ, na-egwu egwu ma na-esokwa ìgwè Bedlam. Na 1973, otu onye na-egwu egwu ya, bụ Dance With The Devil, nke atọ n'ime UK depụtara ndepụta. N'afọ sochirinụ Cozy bịara mara ama mgbe ọ na-egwu egwu na telivishọn ma na-eti ihe ndekọ ahụ dịka onye na-egbu ngwa ngwa. Ọ gwakwara na BBC maka ụmụaka akpọ Record Breakers.
Robert Fripp (* 16. 1946 May Wimborne Minster, Dorset) bụ a British guitarist, na-emeputa na andiwet, mara dị ka naanị na-adịgide adịgide so na-aga n'ihu oké nkume mmachi King Crimson. Ọrụ ya nke dị ihe dị ka iri afọ anọ agafeela ọtụtụ ụdị egwú. Fripp tinye 42. na Rolling Stone magazine "100 kacha mma guitarists niile oge".
Asia bụ a-aga n'ihu nkume supergroup, kpụrụ mbụ òtù dị iche iche nke N'ezie, Eze Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Jide The Ladder, Uriah Heep, UK, na The Buggles na 1981.
King Crimson bụ a British nkume otu hiwere na 1968 guitarist Robert Fripp na oku igba Michael Giles. Nọmalị, ọ na-gụnyere n'etiti tọọ ntọala ìgwè nke na-aga n'ihu na oké nkume na-arụ ọrụ ya mixes na mmetụta dị iche iche egwú ekwekọghị ndị dị otú ahụ dị ka Jazz, oge gboo na ibuo music, psychedelic nkume, arọ metal, ọhụrụ efegharị efegharị, ike nkume, gamelan, ndị mpako na-electronica na drum na bass. Mbụ a British otu mejupụtara 1981 mix nke egwú si United Alaeze na United States.
Peterborough bụ obodo dị n'ógbè Canada nke Canada. Ọ dị 125 kilomita n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Toronto. Peterborough bụ Museum Canoe Museum nke Canada, nanị ụlọ ọrụ ngosi ihe ngosi ụgbọ mmiri pụrụ iche na North America. Na Ontario, a maara obodo ahụ dịka isi maka ebe ntụrụndụ Kawarthas Lakes. A na - akpọ Peterborough aha Peter Robinson, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Canada, otu n'ime ndị na - ahazi ndị njem na mpaghara.
Misha Mengelberg (5. 1935 June Kiev - 3. 2017 March Amsterdam) bụ a Dutch Jazz pianist. A mụrụ na Kiev, nwa a Dutch eduzi Karel Mengelberg na na mbubreyo zitere ya na ezinụlọ ya biri na Netherlands. Ọ malitere na-akpọ piano mgbe afọ ise na 1958 ka 1964 afọ ọ na-amụ na Conservatoire na The Hague. O dere mbụ na 1964 na American Eric Dolphy. N'oge ọrụ ya, ya na ọtụtụ ndị egwú ndị ọzọ, gụnyere Steve Lacy, Peter Brötzmann, Louis Andriessen, Pino Minafra na Roswell Rudd. O weputara otutu n'ime akwukwo ya. Dị ka ihe atụ, na 2005, Senne Sing Song (Tzadik Records), starring bassist Greg Cohen na onye ọgbọ Ben Perowsky.
Kenny Davern (ọmụmụ aha John Kenneth Davern; 7. 1935 January Huntington, New York, USA - 12. 2006 December natara Sandia Park, New Mexico, USA) bụ ihe American clarinetist. Maka ọrụ nke jazz clarinetist, o kpebiri ịhụ Pee Wee Russell maka oge mbụ; ọ malitere igwu egwu mgbe ọ dị afọ iri na otu. 1954 afọ, ọ na sonyeere ìgwè Jack Teagarden na 1958 tọhapụrụ mbụ album n'okpuru ya aha ya nke a na-akpọ Na Gloryland. N'oge ya ọrụ ọ rụkọrọ ọrụ na ndị ọzọ egwú, tinyere Ken Peplowski, Steve Lacy, Greg nchụàjà na Paul Motian. Ọ nwụrụ n'ihi nkụchi obi mgbe ọ dị afọ iri asaa.
Egwuregwu Ọhụụ-Nwanyị bụ onye American na-egwu egwú-egwu egwu telivishọn, mgbasa ozi site na CW. Ndị edemede nke a bụ Rachel Bloom na Aline Bosh McKenna. Ebumnuche ahụ na-agbasa site na 12. October 2015. Kemgbe ahụ, e nweela otu usoro 18, nke 2016 / 2017 TV na-abịa nke abụọ. 8. January 2017 ọdụ gosipụtara ndekọ nke usoro nke atọ, bụ nke malitere na 13. October 2017.
Martin P4M Mercator bụ ụgbọ elu ụgbọ mmiri nke Glenn L. Martin Company rụrụ. Mercator bụ ọma nwa akwukwo na a mpi mara ọkwa na US Navy (US Navy) maka Maritime patrol, ogologo nso otu bombu. E mesịrị merie asọmpi site na Lockheed P2V Neptune. Mercator enweela ọrụ dị oke nta dị ka ụgbọ elu nke na-achọpụta na eletrik. Ihe kachasị mma ya bụ na ọ na-akwado ya site na ngwongwo nke piston na jet engines.
Ice Hockey World n'asọmpi 2011 16 gara mba týmu.Soupiska American týmuTrenéři Scott Gordon, Phil Housley, Greg CroninSoupiska Belarusian týmuTrenéři Eduard Zankovec, Vladimir Tsyplakov, Aleksandr AndlexejevSoupiska Czech týmuTrenéři Alois Hadamczik, Josef PalečekSoupiska Danish týmuTrenéři Per Backman, Tomas JonssonSoupiska Finnish Jukka týmuTrenéři Jalonen, Petri Matikainen, Pasi NurminenSoupiska French týmuTrenéři Dave Henderson, Pierre Pousse, Lionel CharrierSoupiska Canadian týmuTrenéři Ken Hitchcock, Scott Arniel, Peter DeBoerSoupiska Latvian týmuTrenéři Oleg Znarok, Leonids Beresnevs, Harijs VītoliņšSoupiska German týmuTrenéři Uwe Krupp, Ernst Höfner, Harold KreisSoupiska Norwegian týmuTrenéři Roy Johansen, Knut Jørgen Stubdal, Per-Erik AlcénSoupiska Austrian týmuTrenéři Bil Gilligan, Manny Viveiros, Kurt HarandSoupiska týmuTrenéři Russian Vyacheslav Bykov, IG ma ọ bụ ZacharkinSoupiska Slovak týmuTrenéři Glen Hanlon, Frantisek Hossa, Ĺubomír PokovičSoupiska Slovenian týmuTrenéři Matjaž Kopitar, Nik ŽupaničSoupiska Swedish týmuTrenéři pa Marts, Roger Rönnberg, Stefan LadheSoupiska Swiss otu
88 Daedalus bụ MVD nke ụgbọ elu nke Massachusetts (MIT, Cambridge, USA) site na 23. April 1988 gara 115,11 kilomita maka oge 3 na 54 nkeji.
Czech bass Player AZ Douda Milan (Jan Sezelim, Mattocks, obibì jungle ụda, Ca-NA Band, Dr. Jane) Mark Bero (Low Heaven, ex Krucipüsk) Bronislav "Bruno" Kovarik (Krabathor) Zbynek Rýpar (Liveevil) Karel Ferda ( Traktor) Karel Maly (Acoustix) Mark Abraham (SK) - (Fleret) Vladimir Adamský - (Santa) Jakub Antl - NightworkMilan Hanák - (Titanic) Gusta - ProhibiceRobert Balzar - (eg. South Africa, D. Bárta & Illustratosphere Hana Hegerová) Oto Bezloja (Matadors) Milan Broum (Olympic) Filip BenešovskýOndřej Bohemia - KvětyVilém çok - (New Rose, Prague nhọrọ) George "Martha" Dvorak - (Našrot) Kohout - Zdrawej důchodLuboš Vršanský (Elementa, Ahard) Pavel Fort - (eg. Flamengo ) Pavel Galler - (Dreadrot) Jan HaisJan Hromas - (Kučerovci, n'oge gara aga, nwekwara Greenhorns) Marek "Mara" Kohout - (Sandra na ya Vembloudi) (whale) Matthew Havlicek - (Chamber Worcester, Final Vision, Fastfood, JamiroquaiCZ, Michal Foret , Multiplayer) M ATO Ivan (SK) - (Maikal Pavlicek, BSP, ogwumagala, Krucipüsk, Geba Al Dhábba), Fredrik Janáček - (-123 min., Sun eti egwú) Jakub Janků - (ex. Thesaurus, Wolfarian) Honza KrausMichael Beautiful - Laco DécziZdeněk Gold - (Arakain) Vladimir Rubber KulhánekMartin Light - Lucie BíláPavel Chrastina OlympicVláďa Caisek - Buffalo BillJiří Meisner - (nke abụọ ahịhịa, Kamelot) Mardoša - (Tata Bojs) Petr Novotny - (Zalman & spol. , Cohiba) Vojtěch Novák - Koudelníkův synVladimír PadrůněkPeter Pavlik - (Yo Yo Band) Petr Rotschein - (Kamelot) Milan mpempe akwụkwọ - NedvědiFrantišek RabaPavel Jakub RybaRichard Scheufler - (Sheuflers, Prague nhọrọ II, King Size) Milan Špalek - (afe nke elu) Martin ŠtecSvatopluk ŠvábJiří Vesely - (eg. Big isi ojii Brothers) Otto Kokštein - (eg. ara) Karel ŠípPepa Šiko - (Doga) Michal Šerák - (tacit nkwekọrịta, 2Wings, Daryl Green) Franz Franz Fiedler- (DTR) Jindra Vobořil - (eg . Mechie Up, nje, Gen, mgbapụta, 39 Special) Miroslav Vitous - (Weather Report) Kůstka Josef - (Blue Mmetụta) Jiri Kucera DrnecVojta (trampoline Reunion Band) George "Old Man" Sindelar - (Catapult) Petr Kuliš Kujal - (Streetmachine) Kembelín Prokeš - (kechioma Nero) Martin "Donald" Donat - (Booters) Michal Voldřich - (Pipeline) Pavel "Chozo" Jurda - (Bluesberry) PBCH. - (Lucie, Wanastowi Vjecy)
Crazy Horse bụ American Rock Rock a maara maka mmekorita ya na Neil Young. Site na 1969 ruo ugbu a, Crazy Horse na Younge edekọwo 11 studio na ọtụtụ ọba egwu. A tọhapụrụ albums ahụ dị ka Neil Young na Crazy Horse. The Crazy Horse, na 1971 - 2009 usoro, wepụtara isii studio albums.
Back Against the Wall bụ Billy Sherwood album studio, wepụtara na 2005. Ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị na-agụ egwú site na ọtụtụ ìgwè nkume a ma ama na album Sherwood. The album nwere egwu site na Wall si pink Floyd. 2006 wepụtara akwụkwọ ọzọ, na-egosi Ọnwa nke Gbara Ọchịchị (nakwa site na Pink Floyd), ma a na-akpọ yaghachi na Ọchịchịrị nke Ọnwa.
November bụ 314. ụbọchị n'afọ na Gregorian kalenda (315. ụbọchị na a itu ukwu afọ). Site na njedebe nke afọ na-anọgide 51 ụbọchị. Holiday-eme ememe Evžen.UdálostiČeské země1620 - Ụbọchị abụọ mgbe Agha nke White Mountain na Prague capitulated agha Ferdinand II. Štýrského.1664 - Tọrọ ntọala Diocese královéhradecká.1989 - Mgbe a ụgbọ okporo ígwè na mberede nso New Kopisty gburu 6 58 ndị mmadụ na e nwere ndị zraněno.Svět1444 - Crusader drive nke King Vladislav III. Varnenčika e meriri na Agha nke Varna Turks edu Murad II. na Vladislav e zabit.1494 - e bipụtara akpa isi akwụkwọ ọgụgụ akụkọ na Summa de Arithmetica, jiometrị, hà site Luca et Proportionality Pacioli.1871 - Henry Morton Stanley hụrụ a furu efu njem David Livingstone nso ọdọ Tanganika.1918 - mara ọkwa Saxon republika.1970 - agbam onya ọnwa rover 1.Narození Czech 1719 - Jan Krumlov, andiwet na virtuoso Viola d'amore († 24. 1763 September) 1772 - Johann Nepomuk Kanka, andiwet na ọkàiwu († 15. 1865 April) 1812 - Josef Jaroslav Křičenský, Czech revivalist onye so dee († 16. April 1886) 1828Konrad Flo Rida feat, cheesi dere, na-ede akwụkwọ na-akpọ. adịghị anwụ anwụ ọrụ († 21. September 1897) Franz Jordan, Czech entrepreneur na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke German mba († 9. December 1884) 1834 - Martin Josef Novacek, eduzi, dere na music nkụzi ná mba ọzọ († 19. 1906 March) 1845 - Karel Vrba, mineralogist, Rector Ka rlovy, ndọrọ ndọrọ ọchịchị († 7. 1922 December) 1869Wilhelm Elsner, opera na-agụ egwú († 26. August 1903) Michal Tomik, Czechoslovak ndọrọ ndọrọ ọchịchị (†?) 1872 - Francis Klokner, Rector nke Czech ụzụ University († 8. January 1960) 1874Otakar Bradáč, andiwet († 11. January 1924) Leopold Škarek, n'ógbè nke ndị Jesuit († 23. March 1968) 1875 - Vaclav Myslivec, Czechoslovak ndọrọ ndọrọ ọchịchị († 29. May 1934) 1876 - Martin Bohdan Lany, Czech njem, na-azụ ahịa na ndị ozi ala ọzọ († 1941) 1880 - Bohumil kpachara anya, Nnọchianya general nke archdiocese nke Prague († 20. May 1965) 1883 - Bedrich Antonin Wiedermann, ngwa virtuoso, music nkụzi na andiwet († 5. 1951 November) 1886 - růžena šlemrová, Czech omee († 24. 1962 August) 1894Stanislav Mentl, MS. Minister nke Public Health na Physical Education († 12. 1981 September) Jaroslav Vacek, legionnaire na-eguzogide fighter († 23. 1944 August) 1899 - Jan n'Ashterọt, Czech cinematographer († 4. 1972 October)
UdálostiFestival Isle of WightSteve Howe dochie na otu Ee guitarist Peter BankseZaložené skupinyThe Doobie Brothers, n'oge gara aga, mmuo, dabeere Tom Johnston, Patrick Simmons, John Hartman, Dave Shogren.Electric Light eti egwú tọrọ ntọala site na Roy Wood, Jeff Lynne na Bev Bevan.HorslipsKantořiOceanQueen tọrọ ntọala mbụ atọ so Freddie Mercury, Brian May na Roger Taylor. Bassist John dikọn ga iso ke 1971.StyxEmerson, Lake & Palmer Keith Emerson, Greg Lake na Carl Palmer.Earthen VesselZaniklé skupinyThe Beatles tisaa. All òtù inye solo alba.The Dave Clark FiveThe MonkeesSimon & Garfunkel tisaa na ma ndị òtù nke duo ẹmende solo kariéru.The Nice disintegrate. Keith Emerson dabeere ELP.Zemřeli17. January - Billy Stewart, na-agụ egwú (32 afọ) 3. September - Alan "Blind Ikwiikwii" Wilson, a so Mkpọ Okpomọkụ (27 afọ) 18. September - Jimi Hendrix, na guitarist na-agụ egwú (27 afọ) 19. October - Janis Joplin, na-agụ egwú (27 afọ) AlbaDomácí Coniunctio - Blue Mmetụta na Jazz Q PrahaKlíč ka ihe ọmụma - The Ọganihu Organization (EP) Ntụgharị Uche - The Blue EffectSynkopy 61 - Synkopy 61 (EP) Foreign 12 Songs - Randy Newman na ajị agba nke Stars - Tyrannosaurus Rex Song maka Me - FamilyABC - Jackson 5Abraxas - SantanaAfter na Gold Rush - Neil YoungAirconditioning - curved AirAll ihe Ga Daha - George HarrisonAmerican Beauty - Ekele DeadAmerican Woman - The Guess WhoAnyway - FamilyAtom Heart Nne - Pink Floyd Tribute ka Jack Johnson - Miles Davis Tribute na Best m achọ ịma omume ugha Player na World - Merle Haggard, CountryBand nke Gypsys - Jimi HendrixBarrett - Syd BarrettBenefit - Jetro TullThe Best nke Pink Floyd - Pink FloydThe Big O - Roy OrbisonBill Haley si Scrapbook: Ndụ na ilu End - Bill Haley ya CometsBitches & ime biya - Miles Davis, JazzBlack Sabbath - Black SabbathBridge N'ime Nsogbu d Water - Simon & GarfunkelCanto libre - Victor JaraChanges - The MonkeesChapter 2 - Robert FlackChicago (akpọ mgbe ụfọdụ ka Chicago II) - ChicagoClimbing! - MountainCloser si Home - Grand Funk RailroadClose ka Ị - CarpentersCome Iji My Garden - Minnie RipertonCosmo si Factory - Creedence Clearwater RevivalCucumber Castle - The Bee Gees
Egwuregwu Hershey bụ otu ndị ọrụ ice hockey na-eme na American Hockey League. Ndị otu ahụ na-arụ ọrụ na Hershey, Pennsylvania. Egwuregwu egwu ụlọ ha na-egwu na Giant Center. "Na-enye" ​​bụ ụlọ osisi kachasị ogologo na AHL - ebe 1938 nọ na asọmpi ahụ. Otu egwuregwu na-akpọ 20. December 2006 gị 5,000. egwuregwu na asọmpi. Na 2010, ụlọ ọrụ ahụ meriri elekere iri na otu Calder Cup, ihe ngwongwo maka onye na-agba chaa chaa AHL, ihe nchịkọta akụkọ na akụkọ ihe mere eme nke njikọ.
Jackass bụ ihe ngosi telivishọn nke America na MTV site na 2000 ruo 2002. Nke a bụ otu ìgwè nke ndị na-emepụta ọtụtụ ihe dị egwu, dị ize ndụ, na-akpa ọchị kamakwa ọnọdụ ọjọọ. Ná ngwụsị nke ngosi, a na-ese vidiyo JackNNX na fim, otu n'ime ha ọbụna na 4D. A na-akatọ fim abụọ ahụ site na ndị nkatọ ihe nkiri. Ihe nkiri ahụ na ndị na-akwado ya bụ ndị a ma ama n'etiti ndị nọ n'afọ iri na ụma; ndị nne na nna ha maka ụdị ntụrụndụ, nke a na-enye na Jackass, adịghị enweta nghọta. Ọ bụ ezie na Jackass nwere ịdọ aka ná ntị mmeghe iji jide n'aka na ndị na-ahụ ya adịghị abịa, a na-eṅomi Jackass mbụ ahụ, gụnyere ọtụtụ ìgwè na Czech Republic.
Thomas Alan obim elewo (* 7. 1949 December Pomona, California, USA) bụ American na-agụ egwú, na-ewu ewu na-agụ egwú, songwriter na omee. Olu ya American nkatọ Daniel Durchholz dere, sị: The e ji mara olu na music na-agwakọta chanson, blues, Jazz na ibuo ọcha na mgbe ụfọdụ n'ókè fọrọ nke nta na ulo oru music, obim elewo emeela a aha dị ka a ike musical àgwà.
United States na Summer Olympics na Los Angeles 1984 522 na-anọchi anya na-eme egwuregwu (339 183 ikom na ndị inyom) na ọzụzụ 217 25 sportech.Medailisté nsonaazụ site disciplínAtletikaPodrobnější ọmụma, lee Athletics na Summer Olympics 1984.MužiMuži, 400 metrůAlonzo BabersRozběh - 45.81Čtvrtfinále - 44.75Semifinále - 45.17Finále - 44.27 (→ nrite ọlaedo) Antonio McKayRozběh - 45.55Čtvrtfinále - 44.72Semifinále - 44.92Finále - 44.71 (→ ọla nrite) Sunder NixRozběh - 45.42Čtvrtfinále - 45.31Semifinále - 45.51Finále - 44.75 (→ 5. ebe) Men 5 000 metrůDoug PadillaRozběh - 13: 52.56Semifinále - 13: 41.73Finále - 13: 23.56 (→ 7. ebe) Don ClaryRozběh - 13: 44.97Semifinále - 13: 46.02 (→ emeghị ọganihu) Steve LacyRozběh - 13: 46.16Semifinále - 13: 46.65 (→ emeghị ọganihu) Men 10 000 metrůPat oburu akpa Accel - 28: 19.94Finále - 28: 34.59 (→ 15. Place) Craig VirginRozběh - 28: 37.58 (→ emeghị ọganihu) Paul CummingsRozběh - 29: 09.82 (→ emeghị ọganihu) Men marathonPete Pfitzinger - 2: 13: 53 (→ 11. ebe) Alberto Salazar - 2: 14: 19 (→ 15. ebe) John Tuttle - emeghị rụchaa (→ dịghị ebe) Men ima elu vysokýDwight StonesKvalifikace - 2.24mFinále - 2.31 (→ 4. ebe) Doug NordquistKvalifikace - 2.24mFinále - 2.29 (→ 5. ebe) Milton GoodeKvalifikace - 2.24mFinále - enweghị ede (→ enweghị ebe) Men ima elu dalekýCarl LewisKvalifikace - 8.30mFinále - 8.54 (→ nrite ọlaedo) Larry MyricksKvalifikace - 8.02mFinále - 8.16 (→ 4. ebe) Mike McRaeKvalifikace - 7.89mFinále - 7.63 (→ 11. ebe) Men trojskokAl JoynerFinále - 17.26 (→ nrite ọlaedo) Mike ConleyFinále - 17.18 (→ silver nrite) Willie BanksFinále - 16.75 (→ 6. ebe) Men pm oštěpemTom PetranoffKvalifikace - 85.96mFinále - 78.40 (→ 10. ebe) Duncan AtwoodKvalifikace - 79.34mFinále - 78.10 (→ 11. ebe) Steve RollerKvalifikace - 75.50 (→ emeghị ọganihu, 18. ebe) Men na kok banyere tyčiMike TullyKvalifikace - 5.45mFinále - 5.65 (→ silver nrite) Earl BellKvalifikace - 5.45mFinále - 5.60 (→ ọla nrite)
Helix Canadian ike nkume / arọ metal gbalaga hiwere na 1974. Ha kasị ama song nke afọ 1984 si "Rock Ị". The mbụ akara elu gụnyere oku igba Bruce Arnold na-edu ndú na-agụ egwú Brian Vollmer, guitarists Ron Watson na Rick "Minstrel" Trembley keyboardist Don Simmons na bassist Keith "Bert" Zubrigg.
1997 Rowing World Championship bụ 26. agbụrụ dị n'etiti 31. August na 7. September 1997 na Lake Lac d'Aiguebelette na Savoy na Francii.Každoroční akwọ ụgbọ regatta na-adịgide adịgide otu izu haziri site mba akwọ ụgbọ gọọmenti (International Ịkwọ Ụgbọ Federation, FISA), na-emekarị ke mbubreyo okpomọkụ nke dị n'Ebe Ugwu Ụwa. Na-abụghị Olympic afọ, World Cup anọchite anya njedebe nke mba akwọ ụgbọ kalenda na afọ ndị bu ụzọ Olympic Games, bụ ha isi na-eru eru omume. N'egwuregwu Olympic, usoro mmemme ahụ gụnyere naanị ọzụzụ ndị na-adịghị asọmpi Olympic.
Egwuregwu 2014 na-eme egwuregwu ndị hockey na 12 Winter Olympics. ka 23. Febụwarị na Sochi na Bolsai Ice Arena na ámá egwuregwu Setanba. Mmeri Vancouver meriri ìgwè ndị Canada mgbe ọ meriri 3: 0 na njedebe.
Open Connecticut bụ egwuregwu ịgba chaa chaa maka ndị inyom, na-akpọ kwa afọ na Wull Tour na Connecticut New Haven, na Cullman-Heyman Tennis Center. Ọ na-ewepụ n'èzí n'ogige ndị siri ike na DecoTurf n'elu dịka akụkụ nke WTA Premiya. Egwuregwu ahụ bụ akụkụ nke US Open Series North America tour, nkeji iri na-arụ n'oge izu isii tupu US Open.
The Falls: Agba nke ịhụnanya bụ ihe nkiri American 2013 ihe nkiri na-eduzi Jon Garcia dị ka ya onwe edemede. Ihe nkiri ahụ na-esote ọnụ ala nke Falls mgbe afọ ise gasịrị.
Alice Cooper mụrụ Vincent Damon Furnier (* 4. 1948 February Detroit, USA) bụ American rock na-agụ egwú, songwriter na musician onye ọrụ jikọrọ abụọ abụọ ọkara století.S ogbo show na atụmatụ guillotines, electric oche, adịgboroja ọbara na Boa agwọ Strangler Royal bụ a mix nke ngosi egwu movies, Cabaret, music, arọ metal na-arụzi ụgbọala nkume, mere ma ama site Alice Cooper egwuregwu ika nke oké nkume music na bịara mara dị ka ujo oké nkume.
Uraia Heep bụ a British oké nkume mmachi guzobere London na 1969. Iri na abụọ nke ha albums ruru UK Albums Chart (laghachi fantasy eru 7. 1975 partitions n'afọ), mgbe iri na ise Uriah Heep albums na German 200 ọma Mmụọ Ọjọọ & Wizards (#23, 1972) ọnụ na a otu Dugara Zeppelin, Black Sabbath na Deep Purple Uriah Heep ghọrọ otu n'ime n'elu oké nkume dị iche iche nke n'oge 70. afọ.
Ndị nsonye nke 2015 bịara na 16 Elite Ice Hockey World Championship. Onye otu ọ bụla nwere ma ọ dịkarịa ala 15 skaters (ndị mmegide na ndị na-agbachitere) na ndị nchebe abụọ, na ọtụtụ 22 skaters na ndị nchebe atọ.
Richard Laughlain "Lochlyn" Munro (* 12 February 1966, Lac La Hache, British Columbia, Canada) bụ onye nkiri Canada. Ọ bụ onye a ma ama maka ọrụ na ihe nkiri dị ka Night na Roxbury, Scary Movie, Some Like Blond and Freddy vs. Jason. Kemgbe ọtụtụ afọ, 1999-2000 na-akpọ Jack Sheridan na ihe nkiri ahụ karịrị nkeji ndị Witches. Enwere ya maka ihe karịrị 200 ọrụ na ihe nkiri TV na ihe nkiri.
1942 (MCMXLII) bụ afọ nke malitere dị ka kalenda Gregorian site na Thursday. Ihe ndị na - eme na Bohemia na Moravia21. March - Scopt. Václav Moravek, nke kachasi anya nke ndị eze atọ ahụ, nwụrụ n'otu ụzụ na ọtụtụ mmadụ iri na abụọ nke Gestapo27. Mee - Jozef Gabčík na Jan Kubiš rụzuru ọrụ Anthropoid ma wepụ onye osote Reich Protector na RSHA Chief Reinhard Heydrich10. June - German Nazis kpochapụrụ obodo Lidice na Kladna18. June - asaa paratroopers zoro na chọọchị nke St. Cyril na Methodius (Adolf Opalka, Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublik, Jan Hruby, Jaroslav Svarc)
Onyinye bụ otu n'ime n'elu n'ememe na Mormonism (ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe niile Mormon ememe ghọtara nke a mpaghara) .Obdarování e ẹkenam kemgbe 1842 Mormon nchoputa Joseph Smith dị ka akụkụ nke esịtidem nzuzo ememe n'ime Mormon Church. Ugbu a, site na onyinye CJKSPD site ọ bụla okenye so, ma ọ bụrụ na ọ bụ ndị ruru eru. Onye ọ bụla a na-ume ịrụ ememe Onyinye nke ha nwụrụ anwụ nna nna ya. The ememe bụ na ọ na nke akụkọ ihe mere eme ọtụtụ ugboro modernized. Dị CJKSPD bụghị chi nwoke na ike laghachi n'ihu Chineke n'eluigwe na-enweghị ememe Onyinye ..